पाकिस्तानलाई झड्का, फिफाले लगायो प्रतिबन्ध • Nepal's No. 1 Digital News Paper .
पाकिस्तानलाई झड्का, फिफाले लगायो प्रतिबन्ध
असोज २५ । अन्तर्राष्ट्रिय फुटबल महासंघ फिफाले पाकिस्तान फुटबल संघ पिएफएफमाथि प्रतिबन्ध लगाएको छ । पिएफएफलाई स्वतन्त्र रुपले काम गर्न नदिएको र यसको खाता पनि स्वतन्त्र नभएको भन्दै फिफाले प्रतिबन्ध लगाएको हो ।
पाकिस्तानी फुटबल संघको कार्यालय र यसको आर्थिक प्रशासन त्यहाँको अदालतले तोकिदिएको अधिकारीले सञ्चालन गरिरहेको छन् । फुटबल संघ स्वतन्त्र निकाय भएको र यसमा तेस्रो पक्षको हस्तक्षेप मान्य नहुने भन्दै फिफाले पाकिस्तानी फुटबल संघमाथि प्रतिबन्ध लगाएको हो ।
फिफाको प्रतिबन्ध नहटेसम्म अब पाकिस्तानको राष्ट्रिय टोली तथा क्लबले अन्तर्राष्ट्रिय खेल खेल्न पाउने छैनन् । पाकिस्तान फुटबल संघको कार्यालय तथा आर्थिक प्रशासन स्वतन्त्र ढंगले चल्न नदिएसम्म प्रतिबन्ध फुकुवा नहुने फिफाले स्पष्ट पारेको छ । विश्व फुटबल बरियतामा पाकिस्तान २ सयौं स्थानमा छ ।
विश्वकप नेपाली क्रिकेट टोलीको घोषणा
विश्वकप छनोटका लागि राष्ट्रिय टिम घोषणा, को–को टिममा परेनन् ? कहिले को सँग भिडन्त ?
भूमिराजले जिते पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय म्याराथनको उपाधि